Sideed arrimood oo ku saabsan Afrikaanka ka ciyaara Horyaalka Ingiriiska - BBC News Somali
Image caption Sadio Mane ayaa Liverpool ugu soo wareegay 45 milyan oo doolar, isaga oo noqday ciyaaryahanka Afrikaanka ah ee ugu qaalisan
Weriyaha BBC Stanley Kwenda ayaa eegaya todobo arrimood oo ku saabsan ciyaaryahanada Afrikaanka ah ee ka dheela horyaalka Ingiriiska.
Meelkaste way joogaan
Koox kaste oo ka dheesha horyaalka waxaa u dheela ciyaaryahan Afrikaan ah
Image caption Cheikhou Kouyate oo ah kabtanka Senegal wuxuu u dheelaa kooxda West Ham
Qaaradu waxay yeelan kartaaba ciyaaryahana samaynkara kudhawaad hal koox oo dhamaystiran, waxay leedahay ciyaaryahanno isu miisaaman oo baaleyaasha ka dheela, kuwo weerar yahanno ah iyo difaac:
Arrinta layaabka leh ayaa ah in 45-ta ciyaartoy ee Afrika ka socota uusan mid koodna gool haye ahayn. Waase haddii aadan rabin in aad xisaabsato Steve Mandanda, oo ah ciyaaryahan ku dhashay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo gool haye u ah Crystal Palace balse u safta qaranka dalka Faransiiska.
Leicester 5 - Sunderland 5
Image caption Ahmed Musa ayaa sii xoojiyay sida ay ciyaaryahanada Afrikaanka ah uga dhex muuqdaan kooxda Leicester City
Image caption Andre Ayew oo reer Ghana ah ayaa ku biiray West Ham isaga laga soo iibsaday Swansea City xagaagan
Kooxda difaacanaysa horyaalka Ingiriiska ee Leicester City iyo Sunderland ayay u dheelaan ciyaaryahanada ugu badan ee qaaradda Afrika ka soo jeeda iyada oo kooxkaste ay shan ciyaartooy haysato.
Sanadkii hore Crystal Palace ayay u ciyaarayeen ciyaaryahanada ugu badan ee Afrikaan ah iyada oo ay shan ciyaartoy u safteen, laakiin hadda saddex ayaa ka soo haray.
Labo ku cusub horyaalka.
Labadooda ciyaartoyna waxay kala yihiin Emilio Nsue oo ka tirsan naadiga Middlesbrough iyo Sadik El Fitouri oo Manchester United u dheela.
Image caption Eric Bailly oo reer Manchester United ah iyo ciyaaryahanka iyo ciyaaryahanka ay isku kooxda yihiin ee Zlatan Ibrahimovic
Ciyaaryahanka difaaca ka dheela ee Eric Bailly ayaa ka mid ah ciyaaryahanda Afrikaanka ah ee ugu magaca wayn ee ku soo biiray Premier League.